Madheshvani : The voice of Madhesh - News Portal- नेपालमा पनि गाँजा वैध हुनुपर्छ
नेपालमा पनि गाँजा वैध हुनुपर्छ
अमेरिकाको तल्लो सदन कंग्रेसमा गत सोमबार अमेरिकाको ऐनमा गाँजालाई लागू पदार्थको लिस्ट (Controlled Substance Act CSA) बाटै हटाएर (रिसिडुअल हैन, डिसिडुअल) सामान्य अन्य बालीसरह मान्यता दिने नयाँ विधेयक दर्ता भएको छ ।
अमेरिकाको संघस्तरमा गाँजा अझै प्रतिवन्धित छ । ३८ राज्यमा वैध छ र १८ राज्यमा गाँजा किनेर खान पाइन्छ ।
नेपालमा पनि गाँजा वैध हुनासाथ यो नै नेपालको पहिलो ठूलो बाली हुने उत्तिकै संभावना देखिदै छ । त्यो दिनदेखि गरिब कुनाकाप्चाका किसान धनि हुन सुरू गर्नेछ । सरकारले पनि राजश्व मनग्गै उठाउन थाल्नेछ र विकासका लागि कडा सर्तमा बजेट जुटाउन बिदेशी दाताको पाउ मल्नुपर्ने छैन ।
नेपालमा उत्पादित गॉजाका कपडा, लुगा, झोला जुत्ता, कोटका कपडा लगायत धेरै सामाग्री
तत्कालिन अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री मार्गरेट पी गार्फिल्डले २०३४ भदौ ३ गते राजा वीरेन्द्रलाई भेटेर नेपालमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने नत्र नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्ने चेतावनीसहितको जिम्मी कार्टरको विशेष सन्देश सुनाएपछि गाँजामाथि नेपालले प्रतिबन्ध लगाइएको रहेछ । २०३५ वैशाख ७ गते राजा वीरेन्द्रले जिम्मी कार्टरलाई ‘गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि जनताको आयस्रोत गुमेर झन् गरिब भएको र प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न आफूलाई अनुरोध आएको’ बेहोराको चिठी लेखेका थिए। तर अमेरिकाले वास्तै गरेन ।
गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाललाई गाँजाबाट हुने आयस्रोत त बन्द भयो नै, गाँजासम्बन्धी मुद्दामा गरिबहरूलाई कारागारमा राख्नुपरेकाले हरेक वर्ष करोडौँ रुपियाँ थप खर्च पनि भइरहेको रहेको छ ।
यससम्बन्धी विवरण ‘अडियन्स विथ किङ वीरेन्द्र — नार्कोटिक’ नामबाट विकिलिप्स रिपोर्टले बाहिर ल्याइदिएको रहेछ । (नेपाल, १५ चैत २०७६)
अमेरिकाले गाँजालाई सामान्य बाली सरह मान्यता दिने गरी नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । उसले नै विश्वभरि गाँजा प्रतिबन्ध लगाउन लगायो । प्रतिवन्धित अवधिमा नै सारा रिसर्चहरू समेत गरेर पेटेन्ट र प्रोपर्टी अधिकार पनि कब्जा गरिसकेको छ ।
नेपालको गॉजाबाट बनाईएको सामानहरू
१ वर्ष भयो संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजा कडा लागू पदार्थ हैन औषधीय वनस्पति हो, वैध गरेर उपयोग गर्न पाउछ भनेर महासन्धि पास गरेको छ । नेपालले यो प्रस्ताव पास गर्न निर्णायक १ मत दिएको हो तर त्यसपछि अहिलेसम्म चुँ बोलेको छैन । आफ्नो श्रोत विगत साढे ४ दशकसम्म नखोल्दा पनि चुँ बोलेनन्, अहिले त्यो श्रोत पाउदा पनि चुँ गर्दैन । यति लाछी सरकार, प्रशासन र नेताहरू भएको मुलुक नेपाल छ ।
यदि यी नेताहरू र दलहरू यसमा चाँसो दिएर लाग्दैनन् भने अब जनता नै जागेर नयाँ दल खोलेर गाँजालाई खुला गर्न किन न जुर्मुराउने ?
कच्चा गाँजामा THC हुदैन, तर यसलाई केही अतिरिक्त फाइदाहरूको लागि उपभोग गर्न सकिन्छ ।
केही उदाहरणहरू छन्ः
हालका वर्षहरूमा, मानिसहरूले भांगको बोटको अन्य भागहरूमा चासो लिएका छन्, त्ज्ऋ लाई उनीहरूको फोकसबाट हटाउँदै। त्यहाँ बिरुवामा विभिन्न प्रकारका तत्वहरू छन् जुन फाइदाहरू छन्, कहिलेकाहीं रहस्यमय, किनभने तिनीहरू सबै अध्ययन गरिएका छैनन्। यी यौगिकहरू र टर्पेनहरू प्रचुर मात्रामा र धेरै भिन्न हुन्छन्, जहाँ अनुसन्धानकर्ताहरूलाई थाहा हुँदैन कि त्यहाँ कति छन् र तिनीहरूका प्रभावहरू पूर्ण रूपमा के छन्।
भांगको बोटमा त्ज्ऋ प्रभावकारी हुनको लागि – उच्च र आराम वा रचनात्मकताको अनुभूति प्रदान गर्दै – बोटलाई डेकार्बोक्सीलेसन प्रक्रियाबाट गुज्रनु आवश्यक छ । यो धेरै नियोफाइट क्यानाबिस शेफहरूले खाना पकाउनु अघि छोड्ने चरण हो । डेकार्बोक्सीलेसन तब हुन्छ जब तपाइँ बिरुवामा तातो लगाउनुहुन्छ, चाहे जोइन्ट धुम्रपान गर्दा वा भांगलाई तपाइँको खानेकुरामा थप्नु अघि पहिले तातो गर्दा ।
यसको प्राकृतिक अवस्थामा, भांगमा कुनै THC छैन । यसको सट्टामा यसमा THCA भनिने एक कम्पाउन्ड छ, जुन एन्टि–इन्फ्लेमेटरी गुणहरू, मस्तिष्क स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन, कोशिकाहरूको प्रसार, र क्यान्सर कोशिकाहरूको वृद्धि र फैलावटलाई पनि ढिलो बनाउँछ ।
आशा छ कि यो दृष्टिकोणले तपाईंलाई विभिन्न तरिकामा भांग प्रयोग गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यदि तपाइँसँग भांगका पातहरूमा पहुँच छ भने तपाइँसँग भांगको बोटमा पहुँच छ । आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहोस्; पेय, चिया र कफीहरू इन्फ्युज गर्न, वा ककटेलमा चिसो र सुगन्धित ट्विस्ट थप्न र केही बेलुका पाहुनाहरूलाई वाह गर्नका लागि स्टिकहरू, डाँठहरू, पातहरू र यस्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
(भीम उपाध्याय नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)
नेतृत्वले एमसीसीको भ्रम चिर्नुपर्छ (विचार)
एमसीसी नेपाललाई आवश्यक एक सहयोग (विचार)
बंगलादेशमा हिन्दू धर्मावलम्बी (विचार)
राष्ट्रियता जनतामा हुन्छ, भूगोलमा होइन : महन्थ ठाकुर
नेपाल कसरी बहुराष्ट्रिय राज्य हो ?
नागरिकता अध्यादेश र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (विचार)